Dumarka Oo Kaliya: 5 Su’aalood Oo Kuu Muujinaya Bisaylka Lamaanahaaga – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Dumarka Oo Kaliya: 5 Su’aalood Oo Kuu Muujinaya Bisaylka Lamaanahaaga
Dumar badan ayaa ka cawda dhibaatada ay ku qabaan lamaanahooda nolosha, waxa uu doonayaa in uu i yareysto waxwalba oo aan sameeyo ma cajab geliyaan, waxaan ka daalay khilaaf soo noqnoqday oo lamaanahayga igala dhaxeeya, waxa uu doonayaa inaan sidiisa oo kale noqdo, waxaan dareemayaa murugo – waa cabooshin dumar badan ka soo yeedha guurkooda kadib, “Waxaa hubaal ah in ragga oo dhan aanay sidaa wada ahayn.”
Dr. Maxamed Cali oo ah la-taliye Psychiatry ku takhsusay, ayaa jariidada “Youm7” u sheegay in lamaanaha nolosha ee ay gabadhu xulaneysaa ay lagama maarmaan tahay in uu yahay qof u bisil guurka. Ninka guurka u bisil waa nicmad Alle uu bixiyo, marka aad eegto jacaylkiisa, fikirkiisa oo ka duwan ragga kale ee ay cuqdadi hayso ama aragtida gaaban ee caadifiga leh.
Dhakhtarkani waxa uu tilmaamay in su’aalo dhowr ah ay tahay in haweenaydu ay is weydiiso inta aanay la aqal gelin lamaanaha ay u doonan tahay:.
Haddii jawaabtaadu tahay haa, ogow inaanuu ninkaasi ahayn qof bisil, maxaa yeelay; qofka ilbaxa ah lagama yaabo inuu xuduuddiisa soo dhaafo, waxa uu aaminsan yahay in uu shey gaar ah kuu yahay, sidaas ayuuna kugu ixtiraamaa.
Haddii aad dareento inaad noloshiisa ku tahay 2, waxaad ogaataa inaanuu ahayn qofkii saxda ahaa, iyadoo ay jirto inuu shaqo ku masquulsan yahay ayaa hadana aanuu ka daaleyn farriimaha jacelka iyo kalgaceylka leh.X
La Wadaag Saaxiibaddaa (Share).⇓
Daraasad shaaca ka qaaday Dhibaatada hurdo la aanta ama hurdo...